Isiraely: manohitra ny fanompoam-pirenena ny olom-pirenena Arabon’Isiraely · Global Voices teny Malagasy
Isiraely: manohitra ny fanompoam-pirenena ny olom-pirenena Arabon’Isiraely
Voadika ny 20 Novambra 2007 6:49 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Español, عربي, English
Alohan'ny zava-drehetra dia misaotra an'i Tomavana niasa irery teto andro maromaro ary tsy dia kivy loatra. Manaraka izany dia mamporisika antsika izay mba manana fahalalana kely ny teny anglisy sy mazoto handika teny mba hanampy ny ekipa ihany koa. Izay no ela fa hiditra amin'ny votoatin-dresaka amin'izay isika. « Olom-pirenena Arabon’Isiraely » no fehezanteny ampiasaina ireo Arabo na mpiteny Arabo izay tsy jiosy, fa olom-pirenen’ny Firenena Isiraely. (famaritan’ny Wikipedia)
Maherin’ny 1.400.000 ny isan’ny Arabo Isiraeliana (eo ho eo amin’ny 19,8%n’ny mponina ao Isiraely). Sarotra dia sarotra ny miresaka momba azy ireo noho ny fifanoheran’ny fihaviany sy ny zom-pireneny ao anatin’ny faritra ifandrafian’izy roa indrindra. Betsaka manko ny Olom-pirenena Arabon’Isiraely no mihevitra fa avakavahan’ny firenena izy ireo, satria ny firenena dia Jiosy. Tsy noterena hanao fanompoana tao amin’ny tafika ny tanora Arabo Isiraeliana, mba tsy hiady saina loatra amin’ny hoe hifanandrina amin’ny rahalahiny izy ireo. Na izany aza vao haingana teo dia nanapa-kevitra ny fitondrana hametraka lalàna handrisika ny tanora Arabo isiraeliana rehetra hanao fanompoam-pirenena amin’ny endrika hafa kosa indray. Tafiditra amin’izany ny mety hiarahana miasa amin’ny fikambanana any amin’ny fiarahamonina sy tanàna mahantra.
Tsy namparisika loatra ny mpitarika avy amin’ny Arabo Isiraeliana io tolokevitra io. Indreto misy dikam-bolongana avy amin’ny teny hebreo nosoratana Jiosy sy Arabo olom-pirenen’Isiraely maneho ny heviny amin’ity toe-draharaha manahirana ity.
Avraham Pechter, mpanolotsaina sy mpitsara Isiraeliana, ohatra ao amin’ny bolongany dia mamaofivaofy ny petrak’olana nasehon’ny mpitarika avy amin’ny fiaraha-monina Arabo Isiraeliana momba ity tolo-dalàna amin’ny fanompoam-pirenena ity:
Roa volana lasa izay no namporisihan’ny governemanta ny hanaovan’ny avy amin’ny Arabo isiraeliana fanompoam-pirenena. Asam-panolorantena io ary ny vondron’ny Arabo Isiraeliana no nokinendry. Amporisihana hanolotena hikarakara ny any amin’ny hopitaly, sekoly, toera-pitsaboana, toeram-panarenana ireo miankina amin’ny zavamahadomelina na toerana misahana ny fikarakarana sosialy hafa ny tanora tsy manao raharaha miaramila. Afaka amin’ny tsy maintsy hanaovana raharaha miaramila moa ny Isiraeliana Arabo noho ny antony fandriampahalemana sy ny ara-drariny mazava loatra; tsy mety aminy kosa raha terena hiady amin’ny Palestiniana izy ireo. Efa tadiaviny rahateo ny fitoviana eto amin’ity firenena ity nefa tsy marisika izy ireo ny hampakarana ny hajan’ny fiaraha-monina Arabo Isiraeliana, izay mety ho azo vetivety amin’ny alalan’ity fiantsoana fanompoam-pirenena ity. Fihatsarambelatsihy raha mbola avela toy izao hatrany ny zavamisy: Manao izay hampiharihariana ny fahasamihafana, mampitombo ny fahantrana sy ny fanaovan-keloka bevava, ary miantraika any amin’ny vokatry ny politika ao anatin’ny fiarahamonina ao amin-dry zareo izany.
Niteny kosa Atoa Jamal Zahalka Arabo Isiraeliana mpikambana parlemantera ho setrin’ny fananganana ny vaomieran’ny fanompoam-pirenena fa “Horoahin’ny ao amin’ny fiarahamonina Arabo sy heverina ho toy ny boka (tsy azo iarahamonina) izay manolotena hanao izany fanompoampirenena izany”. Ny mpitarika Arabo Isiraeliana hafa izay manohana an’i Zahalka moa dia manambara fa ny fanompoam-pirenena no dingana voalohany handripahana ny Arabo.
Dia manontany tena aho hoe aiza izay fitohizam-pahamarinana amin’io? Ahoana moa no hakana tanora Isiraeliana hikarakara sy hanampy amin’ny fanatsarana ny fiainan’ny Arabo raha tsy mahazo mirotsaka ho amin’izany fanompoam-pirenena izany ny tanora Arabo noho ny fiangavian’ny mpitarika ao amin’izy ireo? Mitaraina ny mpitarika Arabo fa misy ny fitombon’ny fanaovan-keloka, fihinanana zavamahadomelina sy ny fanaovana herisetra ao anatin’ny fiarahamonina iainandry zareo, ary mbola mitaky hanampiana ny isan’ireo mpanolotena sy hampakarana ny vola hikarakarana azy ireo izy, nefa soketainy ho “mpamadika” na “boka” izay mitady hanolotena avy amin-dry zareo.
Tao amin’ny bolongana hafa no nisy izao valitenina Isiraeliana izao:
Miezaka ny tsy maintsy hampanaovan’ny Isiraeliana Arabo ny fanompoam-pirenena ny governemanta isiraeliana. Tsy niandry ela ny fanoherana izany fikasana izany, nitsangam-bolo ny sasany teo ampamakiana ilay lalàna ary nilaza fa “tadiavina ho Isiraeliavana ny tanoranay” araka ny fitenenana parlemantera Isiraeliana Arabo iray.
Aza fady hoe, fa angaha moa tsy efa Isiraeliana ianareo?
Sa amin’ny sandan-karama raisina, fandraisana ny vola fanampiana avy amin’ny governemanta, saram-piantohana ny fahasalamana, fikarakarana ny jiro sy ny rano ihany no mahaisiraeliana anareo? Eo ampivoriana momba ity lohahevitra ity moa androany ny komity iray ao Haifa. Manontany tena aho ny amin’izay ho fiafarantsika raha mahita ny tsikera sy ny fitarainana nivoaka avy tao. Toa ho sarotra dia sarotra ny hampifanohy ny hantsana mampisaraka antsika.
Amin’ity bolongana ity dia azo fantampantarina tsara ny fijerin’ny Arabo Isiraeliana izany atao hoe Isiraeliana fa teraka Arabo Kristiana:
Amin’ny maha-Isiraeliana ahy nefa teraka Kristiana Arabo, dia sarotra sady mifamahofaho ny momba ahy. Na dia mahatsapa ny tenako ho Isiraeliana tanteraka aza aho, misy feo any amin’ny Arabo miteny ahy ho Pelestiniana. Resy teto ny razambenay 60 taona lasa izay. Tsy eken’ny Isiraeliana ho Isiraeliana izahay. Olonkafa no fijeriny anay. Tsy fantatro intsony hoe fa inona moa izahay ? Raha mioko manohitra ity firenena ity izahay dia alan’ny Jiosy baraka fa, amin’ny mahaisiraeliana dia manohitra ny tanindrazana izahay. Nefa etsy ankilan’izany rehefa miaro an’Isiraely izahay satria eto izahay no monina dia hantsoin’ny Palestiniana fa mpamadika izahay, ary dradrainy fa efa manadino izay fiavianay izahay. … Nefa tsy tia ny Arabo Isiraeliana ny Palestiniana. Ankahalainy mihoatra noho ny Jiosy ireo no tena marina. Ary ny Jiosy amin’ity firenena ity koa mankahala ny Arabo Isiraeliana satria mitovy endrika amin’ny Palestiniana izahay. Ka aiza ihany ary no ametrahana anay ireto e??
Emirà Arabo Mitambatra 28 Jona 2021
Tsy misy fisaorana fa izaho no faly mamaky indray anao etoana, Ra-Jentl !
20 Novambra 2007, 08:21
Ndry fa lasa aiza ny lahatsoratra hafa teo? sa tsy efa nisy hafa moa teo
21 Novambra 2007, 07:59
Hiresaka koa -> Tomavana